Sosialy Archives - Page 88 sur 154 -
Mitia sy Fitia : Nihazo ny distrikan’i Mandoto omaly
Iray volana mahery taorian’ny fandidiana ireo zaza menavava mirahavavy nitambatra, na irony antsoina amin’ny teny vahiny hoe “Siamois” dia fantatra amin’izao fotoana izao fa tsy misy ahiana intsony ny fahasalaman’i Nambinina Harilala Fitia sy Nambinina …Tohiny
Kaominina Ivato : Manomboka ny fanamboarana lalan-kely
Fampandrosoana ny tanàna no tanjona. Io no nambaran’ny Ben’ny tanànan’Ivato, Penjy Randrianarisoa. Noho izany indrindra, nidina ifotony nijery ny fandravonana ny lalan-kely eo amin’ilay atao hoe K7 ny Ben’ny tanànan’Ivato miaraka amin’ireo mpiara-miasa aminy. Fanombohan’ny …Tohiny
Teratany frantsay voan’ny pesta : Namoy ny ainy rehefa nitsoaka ny hopitaly
Lehilahy teratany frantsay, 40 taona no namoy ny ainy tany Toamasina ny sabotsy lasa teo, noho ny valanaretina pesta. Araka ny tati-baovao avy any an-toerana, dia ny alatsinainy heriny lasa iny no efa fantatra fa …Tohiny
Filoha mivady : Sakaizan’ny fanabeazana sy ny ankizy
Mampiavaka ny filoha Hery Rajaonarimampianina mivady ny fitiavany ny ankizy Malagasy ho tafita soa amin’ny fianarany, ka nasehony amin’ny alalan’ny fanampiana ny zaza malagasy, toy ny fanamboarana trano famakiam-boky sns…izany. Mbola niseho koa izany tany …Tohiny